तपाईँले स्वचालित तवरले LibreOffice सुधार गर्न नचाहेको अक्षर संयोजनहरू वा पद्यासहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।
तपाईँले परिभाषित गर्नुहुने अपवादहरू हालको भाषा सेटिङमा निर्भर गर्दछ. यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले भाषाका लागि प्रतिस्थापनहरू र अपवादहरू बाकसमा एउटा भिन्न भाषा चयन गरेर भाषा सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।
भाषाका लागि बदल्नुहोस् गर्छ र अपवाद गर्छ:
त्यो भाषा चयन गर्नुहोस् जसका लागि तपाईँले बदल्नुहोस् नियमहरू सिर्जना वा सम्पादन गर्न चाहनुहुन्छ । LibreOffice ले पहिला ती अपवादहरू खोज्दछ जुन कागजातमा हालको कर्सर स्थितिको भाषाका लागि परिभाषित छन्, र त्यसपछि बाँकी भाषाहरू खोज्दछ ।
पद्यांसहरू (पछिल्लो ठूला अक्षर हुँदैन)
एउटा अवधिद्वारा अनुशरण गरिएको पद्यांश टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि नयाँ मा क्लिक गर्नुहोस् यसले पद्यांशको अन्त्यमा अवधि पछि आउने शब्दको पहिलो अक्षरलाई स्वचालित रूपमा ठुलो बनाउनबाट LibreOffice लाई बचाव गर्दछ ।
स्वचालित तवरले सुधार नगरिएको पंद्यासहरू सूची गर्छ । सूचीबाट एउटा वस्तु हटाउन, वस्तु चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि मेट्नुहोस्क्लिक गर्नुहोस्
TWo INitial CApitals सहित शब्दहरू
तपाईँले LibreOffice ले एउटा प्रारम्भिक ठूलो वर्णमा परिवर्तन गर्न नचाहेको दुइवटा ठुला अक्षरहरूबाट सुरु हुने शब्द वा पद्यांश टाइप गर्नुहोस् उदाहरणका लागि, PC बाट Pc मा परिवर्तन गर्नबाट LibreOffice लाई बचाव गर्न PC प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
स्वचालित रूपमा शुद्ध नगरिएको दुइवटा प्रारम्भिक ठूलो वर्णहरू सँग सुरु हुने शब्दहरू वा पद्यांशहरू सूचीबद्ध गर्दछ. दुइवटा ठुला अक्षरहरूबाट सुरु हुने सबै शब्दहरू फाँटमा सूचीबद्ध हुन्छन् । सूचीबाट एउटा वस्तु हटाउन, वस्तु चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि मेट्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् ।
अपवादहरूको सूची लाई हालको प्रविष्टि थप्छ ।
अपवादहरूको समनुरूप सूचीमा दुइवटा ठुला अक्षरहरू सँग सुरु हुने पद्यांशहरू वा शब्दहरू स्वचालित रूपमा थप्दछ. यो विशेषताले त्यतिबेला मात्र काम गर्दछ यदि TWo INitial CApitals शुद्ध गर्नुहोस् विकल्प वा प्रत्येक वाक्यको पहिलो अक्षर ठूलो वर्ण बनाउनुहोस् विकल्प [T] स्तम्भमा यो संवादकोविकल्प ट्याबमा चयन गरिन्छ ।
Title is: अपवादहरू